Horseed Media News - YouTube
Horseed Media News
Soodhaweynta Farmaajo Madaxtooyada Bosaaso
9,000 views 5 days ago
Muuqaalka jawiga soo dhaweynta Madaxweyne Farmaajo nawaaxiga Madaxtooyada Bosaso - Jidka 30ka. Show less
Soodhaweynta Farmaajo Madaxtooyada Bosaaso - Duration: 6 minutes, 45 seconds.
Qardho: Soodhaweyntii Madaxweyne Farmaajo - Duration: 7 minutes, 44 seconds.
Puntland oo Aqbashay Go'aankii Isimadda Puntland - Duration: 6 minutes, 18 seconds.
Ganacsatadu Puntland Maxay Ka Yiraahdeen Go'aankii Isimada Puntland - Duration: 3 minutes, 59 seconds.
Khudbadii Boqor Burhaan ee Soo Bandhigidii Go'aankii Isimada ee Dekeda Bosaso - Duration: 4 minutes, 7 seconds.
Beeldaaje Cali Faarax: Go'aanka Isimaddu Muddo 5 bilood ah ayuu shaqaynayaa - Duration: 4 minutes, 7 seconds.
GO'AANKII ISIMADA EE MURANKA DEKEDA BOSASO - Duration: 2 minutes, 14 seconds.
Jeneraal Xasuuqay Muslimiin oo Sun Cabay isagoo Maxkamada hortaagan - Duration: 53 seconds.
Cirro: Doorashadii Somaliland Waa Lagu shubtay - Duration: 5 minutes, 25 seconds.
Nabadoono iyo Haween Lagu Eedeeyay Mudaharaadyada Bosaso - Duration: 56 seconds.
Somaliland: Rabshadihii Doorashada ee Burco & Hargeysa - Duration: 6 minutes, 35 seconds.
Somaliland: Muuse Biixi oo ku hanjabay inuu la dagaalamayo Puntland - Duration: 6 minutes, 38 seconds.
Soomaalida Play all
Baarlamaanka oo fasaxay miisaaniyadda ciidamada qalabka sida - Duration: 2 minutes, 54 seconds.
Warka Baarlamaanka Puntland oo ansixiyey Heshiiska Dekadda Boosaaso ee DPWorld iyo Heshiiska shidaal - Duration: 5 minutes, 58 seconds.
Wasiirka Gaadiidka Puntland oo u Jawaabay Xildhibaan Faroole - Duration: 116 seconds.
Faroole: Dastuurka Puntland Weligiis Waxba Laga Bedelin - Duration: 4 minutes, 41 seconds.
Barlamaanka Puntland oo Ansixiyay xisaab xirka Miisaaniyadii 2016ka ee xukuumadda - Duration: 3 minutes, 18 seconds.
Madaxweyne Gaas: Dib Ha Loo Eego Axdiga Lagu Dhisay Puntland - Duration: 5 minutes, 34 seconds.
Raysalwasaare Kheyre oo la kulmey Maxaabiis hore - Duration: 4 minutes, 56 seconds.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ay weheliyaan qaar ka mid ah Golahiisa Wasiirada, Xildhibaanno iyo Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya...
114 qof oo ku xirnaa xabsiyada Itoobiya ayaa Muqdisho la keenay iyaga oo xor ah - Duration: 4 minutes, 28 seconds.
Wasaaradda Maaliyadda Puntland oo Barlamaanka u Gudbisay Xisaabxirkii 2016ka - Duration: 17 minutes.
Barlamaanka dowladda Puntland ayaa ka doodaya sidii loo maamulay xisaabxirkii misaaniyadii 2016ka ee dowladda Puntland taasi oo maanta uu soo gudbiyay ku-simaha wasiirka maaliyadda puntland Ca...
Codbixintii Baarlamaanka Puntland oo riday xukuumada Puntland - Duration: 11 minutes.
Golaha Wakiilada Puntland ayaa maanta si rasmi ah kalsoonidii ugala noqdey golaha Wasiirada ee Puntland, kadib markii ay Mooshin ka keeneen Xildhibaano kor u dhaafaya 40 Xildhibaan.
Madaxweyen Gaas oo Soo Dhaweeyay Goaankii Barlamaanka - Duration: 87 seconds.
Raysalwasaare Kheyre oo kormeer ku tegey wasaaradda arrimaha gudaha - Duration: 2 minutes, 42 seconds.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta galinkii dambe kormeer ku tagay Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta Soomaaliya waxuuna kula kulmay Wasii...
Caalamka Play all
UK: Khasaaraha Weerarkii London iyo Jawaabtii Dowlada UK - Duration: 9 minutes, 16 seconds.
Saddex nin ayaa weerar ka geystey bartamaha London ee dalka Ingriiska, waxay dileen ugu yaraan 7 qof, ka hor inta aan Boolisku toogan iyaga.
USA: Trump oo ka baxay heshiiskii Caalamiga ahaa ee Cimilada - Duration: 7 minutes, 20 seconds.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in Maraykanka uu isaga baxayo heshiiskii horey u saxiixay ee ka hortagida iyo Hoos u dhigida Saameynta xun ee Warshadaha ku hayaa...
Maraykanka oo tijaabiyey Gantaalka Difaaca oo kharash badan ku baxay - Duration: 2 minutes, 36 seconds.
Militariga Maraykanka ayaa Salaasadii warbaahinta u sheegay inay ku guuleysteen tijaabinta Mid kamid ah Gantaalada Difaaca ee wadankaasi dhisayey sanadihii lasoo dhaafay.
USA: Agaasimihii isgaarsiinta ee Trump oo iscasilay - Duration: 51 seconds.
Michael Dubke oo ahaa Madaxa Isgaarsiinta ee Aqalka Cad ayaa si rasmi ah u shaaciyey inuu xilka iska casilay, warkan oo kusoo beegmay xili la hadal hayo in Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu i...
IRAQ: Dacish oo sheegatay Weeraradii ugu xumaa ee bisha Ramadan - Duration: 102 seconds.
Dad gaaraya 27 qof ayaa ku dhintay labo qarax oo waaweyn oo habeenimadii Salaasada iyo subaxnimadii shalay ka dhacay caasimada Ciraaq ee Baqdaad.
Philippines: Daacish iyo Militariga ku dagaalamaya magalada Marawi - Duration: 2 minutes, 40 seconds.
Waxaa sii kordheysa tiradda dadka ku dhintay dagaalka ka socda magaalada Marawi ee koonfurta dalka Filibiin deegaankaasi oo ay qabsatay koox taageersan Daacish.
USA:Cunsuri Cadaan ah oo Mindi ku weeraray gabdho muslim ah - Duration: 118 seconds.
Hay’ada FBI-da ayaa baaritaan ku wada weerar Jimcihii ka dhacay magaalada Portland ee gobalka Oregon oo uu Nin cunsuri cadaan ah ku dilay labo qof.
UK: Baaritaanka weerarkii Manchester iyo kooxda ka danbeysay - Duration: 3 minutes, 36 seconds.
Ciidamada la dagaalanka argagaxisada ee dalka Liibiya ayaa xabsiga dhigay aabaha dhalay wiilkii fuliyey weerarkii ismiidaaminta ee habeenkii salaasada soo galeysay ka dhacay stadium ku yaal magaala...
UK: Booliiska oo qabtay nin mindiyo ku hubeysan - Duration: 4 minutes, 8 seconds.
Booliiska magaalada London ee caasimada UK ayaa maanta gacanta ku dhigay nin la tuhunsan yahay inuu qorsheenayey weerar argagaxin ah.
Syria: Diyaaradaha Israel oo duqeeyey Dimishiq - Duration: 8 minutes, 29 seconds.
Dowlada Siiriya ayaa ku eedaysay diyaaradaha Israel inay ka danbeeyeen duqeyn saaka (Khamiis) arooryadii lala beegsaday meel u dhaw madaarka weyn ee magaalada Dimishiq.
Afghanistan: Baroordiiqda 140 askari oo ay dishay kooxda Taliban - Duration: 2 minutes, 23 seconds.
Dalka Afghanistan ayaa waxaa ka bilaabatay sadex maalmood oo baroordiiq ah oo loo sameenayo in ka badan 140 askari oo lagu dilay Jimcihii weerar ay kooxda Taliban ku qaaday Saldhig Militari oo ku y...
France: Labada Murashax ee isugu soo haray Tartanka Madaxweynaha - Duration: 3 minutes, 28 seconds.
Wareega kowaad ee Doorashada Madaxweynaha Faransiiska oo Axadii shalay la qabtay ayaa waxaa kusoo baxay labada murashax Emmanuel Macron iyo Marine Le Pen oo iyadu hogaamisa xisbiga xagjirka ah ee ...
Muuqaalo Xiisoleh Play all
Caleemo Saarkii Farmaajo iyo Khudbadihii ugu muhiimsanaa - Duration: 25 minutes.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa maanta si rasmi ah loogu caleema saarey halkii lagu doortey laba todobaad ka hor. Waxaa ka soo qayb-galay ca...
Maxkamada ICJ oo laalshay Codsigii Kenya ee Kiiska Badda - Duration: 3 minutes, 32 seconds.
Maxkamada Caalamiga ah oo bilihii lasoo dhaafay baareysay shuruucda ku aadan dooda ay Maxkamada usoo gudbisay dowlada Kenya oo diiday in Maxkamada ay faraha la gasho Kiiska Soomaaliya soo codsatay ...
Mogadishu: Guddoomiyaha cusub ee Aqalka Sare DFS - Duration: 10 minutes.
Mudanayaasha Aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya ayaa maanta u fariistey in ay doortaan shirguddoonka Aqalka sare, Xilka Guddoomiyaha waxaa cod aqlabiyad ah ku guuleystey Cabd...
Cadaado: NISA oo cadaadi ku heysa Xildhibaanada Galmudug - Duration: 2 minutes, 44 seconds.
Ciidamada NISA oo magaalada Cadaado ka bilaabay cadaadis ay ku hayaan Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ee xilkii ka qaaday Cabdikariim Guuleed.
Cadaado: Guddiga Doorashada Madaxweynaha Galmudug oo la magacaabay - Duration: 4 minutes, 19 seconds.
Baarlamaanka Galmudug ayaa dhameystiray magacaabida guddiyada loo xilsaaray Doorashada Madaxweynaha cusub ee Galmudug, xili uu Cabdikariim Guuleed diidan yahay go'aankii xilka looga qaaday.
Mogadishu: Dhaarintii Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka - Duration: 46 seconds.
Waxaa maanta la dhaariyey inta badan xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Xasan iyo Ilhan qaabka kala duwan oo ay uga hadleen Donald Trump - Duration: 3 minutes, 38 seconds.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh oo diiday inuu difaaco Soomaalida uu aflagaadeeyey Donald Trump iyo Xildhibaanada Minnesota Ilhan Cumar oo jawaab ka duwan tii Xasan bixisay. Akhriso: https://h...
Puntland: Muuqaalo Xoreyntii Degmada Qandala - Duration: 4 minutes, 43 seconds.
Muuqaalo iyo Sawiro hawlgalkii Ciidamada Dowlada Puntland ay kooxda Daacish uga saareen magaalada Qandala ee gobalka Bari.
Puntland: Duqeyn ka dhacday degmada Qandala - Duration: 67 seconds.
Waxaa dhaq dhaqaaq militari laga dareemayaa nawaaxiga degmada Qandala halkaasi oo ay gaareen ciidamo ka socda Puntland. Bada magaalada Qandala ayey sidoo kale gaareen Maraakiib dagaal.
Puntland: Kooxda Daacish ee Muumin oo tagay Qandala - Duration: 93 seconds.
Kooxda Xagjirka ah ee uu Daacishta Soomaaliya ee uu hogaamiyo Cabdulqaadir Muumin ayaa lagu soo waramayaa inay maanta gudaha u galeen magaalada Qandala ee gobalka Bari.
Gaalkacyo: Wasiirada Puntland oo booqday Goobihii dagaalka ka dhacay - Duration: 4 minutes, 13 seconds.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Puntland Axmed Karaash oo kormeer ku tagay Maxjarka Gaalkacyo iyo goobihii dagaalada ka dhacay ayaa Jawaab adag ka bixiyey hadalkii Madaxweynaha Galmudug ee ahaa in Gaalkac...
Gaalkacyo: Dagaalo markale ka dhacay Koonfurta & Galbeedka Gaalkacyo - Duration: 8 minutes, 31 seconds.
Waxaa markale dagaalo culus ay dhexmareen ciidamada Puntland iyo Galmudug oo isku haya dhul ku yaal Koonfur Galbeed ee xarunta gobalka Mudug ee Gaalkacyo.
Sports / Ciyaaraha Play all
Puntland: Ciyaraha Horyaalka ka socda Gaalkacyo - Duration: 3 minutes, 21 seconds.
Horseed Media Sport
Magaalada Gaalkacyo ayey ku kulmeen kooxaha Somtel iyo Comsed ee magaaladaasi ka wada dhisan, ciyaartaasi oo ku dhamaatay barbardhac 2-2.
Kooxda Bosaso FC oo si weyn loogu soo dhaweeyey Bosaaso - Duration: 3 minutes, 22 seconds.
Magaalada Bosaaso ayaa maanta soodhaweyn balaaran loogu sameeyey Ciyaartoyda Naadiga Bosaso FC oo kamid ah Naadiyada heerka kowaad ee ka qeyb qaadanaya Horyaalka kubada Cagta ee Puntland oo todobaa...
Garowe: Furitaanka Hoyraalka Kubada Cagta Puntland - Duration: 2 minutes, 39 seconds.
Waxaa markii ugu horeysay Xiriirka Kubada Cagta ee Soomaliya uu bilaabay Koobka Horyaalka Kooxaha Heerka kowaad ee deegaanada Puntland, horyaalkaasi oo ay ku loolamayaan 9 kooxood ee ah kuwa ugu wa...
FIFA oo dooneysa in la badiyo Kooxaha Ciyaaraha Koobka Dunnida - Duration: 43 seconds.
Qorshahan ayaa ah mid la doonayo in kooxaha gaaraya 32 ee hada ka qeyb qaata Ciyaaraha Finalka ee Koobka Dunnida laga dhigo tiro gaareysa 48 kooxood.
Tartanka Kubada Kolayga Gabdhaha Soomaaliyeed - Duration: 6 minutes, 36 seconds.
Waxaa magaalada Garowe ka bilowday Tartanka Kubada Kolayga ee Gabdhaha Soomaaliyeed
Somaliland: Guushii Xulka Awdal ee Ciyaaraha Gobalada - Duration: 9 minutes, 34 seconds.
Xulka Gobalka Awdal ayaa ku guuleystay koobka Ciyaaraha Gobalada Somaliland oo ay ciyaartii ugu danbeysay (Finalka) uga guulaysteen 2-1 xulka gobalka Saaxil.
Hargeysa: Furitaanka Ciyaaraha Gobalada Somaliland - Duration: 2 minutes, 4 seconds.
Waxaa magaalada Hargeysa ka bilowday wareegii ugu danbeeyey ee koobka gobalada Somaliland oo ay ku loolamayaan 8 gobal oo wareega ugu danbeeya usoo baxay.
Muuqaalo Goolashii Ciyaartii Puntland vs Jubbaland - Duration: 8 minutes, 23 seconds.
Muuqaalo goos goos ah ee Goolashii iyo Rigoorayaashii ciyaartii ugu danbeysay ee Puntland Vs Jubbaland. Xigasho: Access Sports tv.
Jubbaland oo usoo baxday FINAL ciyaaraha Maamulada Soomaaliya - Duration: 5 minutes, 9 seconds.
Xulka matalaya maamulka Jubbaland ayaa noqday kooxdii ugu horeysay ee usoo baxda FINAL ciyaaraha maamulada dalka Soomaaliya ee ka socda Muqdisho. Kooxda Banadir ayey uga badiyeen gool-ku-laad.
Puntland oo usoo baxday Ciyaarta FINAL (Puntland vs H/Sh/Dhexe 1 - 0) - Duration: 9 minutes, 59 seconds.
Xulka Puntland ayaa usoo baxay ciyaarta FINAL-ka kadib markii ay 1 - 0 uga badiyeen xulka Hiiraan & Sh.dhexe. Puntland ayaa maalinta isniinta la ciyaari doonta ciyaarta ugu danbeysay Xulka Jubbaland.
FINAL Puntland vs Jubbaland (Xulka Puntland oo noqday Champions) - Duration: 7 minutes, 56 seconds.
Kooxda Puntland ayaa ku badisay Koobkii Ciyaaraha Maamul Gobaleedyada Soomaaliya oo ka socday Muqdisho. Puntland ayaa ka badisay Kooxda Jubbaland kadib markii loo tuuray Rigooreyaal 5-3. Kadib mark...
Bosaaso: Ciyaaro dhexmaray Kooxaha Horyaalka kowaad ee Puntland - Duration: 3 minutes, 56 seconds.
Kooxaha Bosaaso FC iyo Bari ayaa ciyaar ku dhexmartay magaalada Bosaso xili ay kooxaha heer koowaad ee Puntland isku diyaarinayaan horyaalka gobalada Puntland oo dhawaan bilaaban doona. Ciyaartan a...
Madaxda Soomaalida & Kursi jacaylka - Duration: 77 seconds.
Filimkan Kartoonka ah waxaa sameeyey farshaxanka Soomaaliyeed ee Amin Caamir, waxaana xuquuqdiisa iska leh Amin Arts
Caruurtii Al Shabaab Soo dagaal gelisay oo Saxafada la hadlay - Duration: 6 minutes, 13 seconds.
Wariye Cali Ducale ayaa wareysi kooban la yeeshay Qaar kamid ah Caruurtii Da'ada yaraa oo ay Kooxda Al Shabaab soo dagaal gelisay, kuwaasi oo markii danbe isu dhiibay Ciidamada Puntland.
Murashax Xisbiga Kulmiye Muuse Biixi ayaa sheegay in Somaliland aysan dagaal rabin balse hadii Puntland si militari usoo faro geliso doorashada ay ka jawaabi doonaan.
Al Shabaab iyo Daacish isu dhiibay dowlada Puntland - Duration: 7 minutes, 56 seconds.
Xubno horey uga tirsanaan jiray kooxaha Al Shabaab iyo Daacish oo qaarkood isa soo dhiibay qaarna la qabtay ayaa maanta lagu soo bandhigay magaalada Bosaaso ee xarunta gobalka Bari.
Kenya: Nin mindi sita oo lagu toogtay Irida Safaarada Maraykanka - Duration: 76 seconds.
Nin lagu sheegay inuu ka tirsan yahay Al Shabaab ayey ciidamada Kenya ku toogteen Irida laga galo Safaarada Maraykanka ee Nairobi, kadib markii sida ay sheegeen ninkaasi uu mindi ku dhuftay mid kam...
Puntland baa laga helaa (Hees cusub) - Duration: 10 minutes.
Heestan waxaa wada jiibinaya, Fanaanada weyn Marysan Mursal Ciise, Maxamed Axmed Qoomaal, Cali Xasan (Cali Puntland, Cabdirisaaq Alteezo iyo Xaawo Kiin
Puntland oo goob gaar ah ku xareysay Caruurtii Al Shabaab soo dagaal gelisay - Duration: 14 minutes.
In badan oo kamid ah Maxaabiistii Nolosha looga qabtay Maleeshiyaadkii Al Shabaabka ee ku duulay Puntland, ayaa waxaa ku jiray dhalinyaro da'a yar iyo Caruur aan weli qaan gaarin. Kuwaasi oo dowlad...
Zimbabwe: Banaanbax looga soo horjeedo Mugabe oo ka dhacay Harare - Duration: 2 minutes, 43 seconds.
Ciidamada Amaanka ee dowlada Zimbabwe ayaa awood u adeegsaday banaanbax balaaran oo looga soo horjeedo Madaxweyne Robert Mugabe oo ay caasimada Harare ka dhigeen xisbiyada Mucaaridka.
Al Shabaab oo Baahisay Cododka Kooxdii geysatay Xasuuqii Ambassador Hotel - Duration: 3 minutes, 47 seconds.
Idaacada Kooxda Al Shabaab ayaa baahisay cododka kooxdii geysatay xasuuqii Hotel Ambassador.
PUNTLAND: Waxaa Jira Ciidan Cidiisa ilaalsha - Duration: 98 seconds.
Erayadii iyo Laxankii
Codkii Abwaan Cali Xassan Warsame:
Qayb ka mid ah heestii caanka ahayd ee Calanka Abwaan Cali Puntland:
Waxaa jira ciidan ciidiisa ilaashee
Curaad iyo geesi ciroole iyo wii...
Horseed Media Sport - Channel
SBC SOMALI TV - Channel
SOMALI NEWS LIVE HD - Channel
Garaad Films - Channel
HORUFADHI MEDIA TV - Channel